Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : poissons
laharana faha-12 amin' ny volana malagasy izany, ary zana-bintana baben' ny Alahamady. Ny anarany dia nalaina avy tamin' ny antokon-kintana, izay ataon' ny Arabo El-hoût (Poissons, Hazandrano).
Ny faditra analana ny vintana Alohotsy dia akofam-bary, ny tany mitoetra ila-hoho (mivava efa hirodana), ny tsy mahatohan-tena (kifafa). Ary ny sorona fitadiavana ny soa amin' ny vintana Alohotsy kosa dia ny harentsimaty, ny lambotsimarofy (samy karazam-bakana ireo), ary ny fatotraharahara (fantaka). [Ravelojaona: Firaketana]